၂၈.၂.၂၀၂၀ တစ်နေ့တာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – Sports A2Z
–	အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ယူရိုပါလိဂ်က မမျှော်လင့်ဘဲ ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ ၃၂ သင်းအဆင့် ရှုံးပွဲအပေါ် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေက ဒါဆိုရင် အာဆင်နယ်ပြီးရင် အလွယ်ဆုံးအသင်းနဲ့ပဲ သူတို့ နောက်တစ်ဆင့်မှာ တွေ့ရတော့မှာပေါ့လို့ တွစ်တာမှာ ရေးသားလှောင်ပြောင်။
–	ယူရိုပါလိဂ် မတိုင်ခင် လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ ကြွက်သားဒဏ်ရာရသွားခဲ့လို့ လာမယ့် အဲဗာတန်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ကို တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာစီယယ်လ်လွဲချော်နိုင်ပြီး အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူး အိုဒီယွန် အီဂါလိုကို ဆက်လက်ပွဲထုတ်ရဖွယ်ရှိ။
–	အသင်းကြီးအဆင့်မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ဂျီးရီးယားကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး အိုဒီယွန် အီဂါလိုအနေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်မှာ အသင်းအတွက် ပထမဆုံးပွဲထွက်မှုနဲ့အတူ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ဂျီးရီးယားကစားသမားစံချိန်ကို ထပ်မံရရှိ။
✅ ? Rosenborg (1-0)
✅ ? PSV (4-1)
✅ ? Sporting CP (3-0)
✅ ? AZ (2-0)
❓ ? Manchester United… pic.twitter.com/MEV3Jql0cw
–	ယူရိုပါလိဂ်မှာ အကောင်းဆုံးအိမ်ကွင်းစံချိန်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီး ရိုဆင်ဘော့၊ PSV, AZ နဲ့ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းတို့ကို အနိုင်ယူထားတဲ့ သြစတြီးယားကလပ် LASK လင့်ဇ်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အသင်းကြီးချင်းတွေ့ဆုံမှုကို ဆက်လက်ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့။
–	ပွဲချိန် မိနစ် ၆၀ ကျော်မှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ရာသီဥတုအေးနေလို့ အဝတ်လဲခန်းထဲ သွားနားဖို့ ခိုင်းခဲ့တာကို မသွားခဲ့ဘဲ အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်ကို အရန်ခုံတန်းကနေ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် နည်းပြ အိုလီဂန်နာ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ချီးကျူး။
–	အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ယူရိုပါလိဂျက မမြှျောလငျ့ဘဲ ထှကျခှာခဲ့ရတဲ့ ၃၂ သငျးအဆငျ့ ရှုံးပှဲအပျေါ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှကေ ဒါဆိုရငျ အာဆငျနယျပွီးရငျ အလှယျဆုံးအသငျးနဲ့ပဲ သူတို့ နောကျတဈဆငျ့မှာ တှရေ့တော့မှာပေါ့လို့ တှဈတာမှာ ရေးသားလှောငျပွောငျ။
–	ယူရိုပါလိဂျ မတိုငျခငျ လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျမှာ ကွှကျသားဒဏျရာရသှားခဲ့လို့ လာမယျ့ အဲဗာတနျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျကို တိုကျစဈမှူး အနျတိုနီ မာစီယယျလျလှဲခြျောနိုငျပွီး အသဈချေါယူထားတဲ့ နိုငျဂြီးရီးယားတိုကျစဈမှူး အိုဒီယှနျ အီဂါလိုကို ဆကျလကျပှဲထုတျရဖှယျရှိ။
–	အသငျးကွီးအဆငျ့မှာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးကို ကိုယျစားပွုခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး နိုငျဂြီးရီးယားကစားသမားဖွဈလာခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး အိုဒီယှနျ အီဂါလိုအနနေဲ့ ယူရိုပါလိဂျမှာ အသငျးအတှကျ ပထမဆုံးပှဲထှကျမှုနဲ့အတူ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး နိုငျဂြီးရီးယားကစားသမားစံခြိနျကို ထပျမံရရှိ။
–	ယူရိုပါလိဂျမှာ အကောငျးဆုံးအိမျကှငျးစံခြိနျတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားခဲ့ပွီး ရိုဆငျဘော့၊ PSV, AZ နဲ့ စပို့တငျးလစ်စဘှနျးတို့ကို အနိုငျယူထားတဲ့ သွစတွီးယားကလပျ LASK လငျ့ဇျနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အသငျးကွီးခငျြးတှဆေုံ့မှုကို ဆကျလကျရှောငျလှဲနိုငျခဲ့။
–	ပှဲခြိနျ မိနဈ ၆၀ ကြျောမှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပွီးတဲ့နောကျ ရာသီဥတုအေးနလေို့ အဝတျလဲခနျးထဲ သှားနားဖို့ ခိုငျးခဲ့တာကို မသှားခဲ့ဘဲ အသငျးရဲ့ ပှဲစဉျကို အရနျခုံတနျးကနေ ဆကျလကျကွညျ့ရှုနခေဲ့တဲ့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈရဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုအတှကျ နညျးပွ အိုလီဂနျနာ ဆိုးလျရှားနဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှေ ခြီးကြူး။